Iprototype ye-iPhone 13 enotshi encinci ibonakala kwiMacotakara | IPhone iindaba
IPrototype ye-13 ene-notch encinci ibonakala kwiMacotakara
Ixesha elide iMacotakara ibonelela ngokuvuza kunye namarhe malunga nezixhobo ezitsha ekufuneka ziboniswe ngu-Apple kunye nemeko ye-iPhone 13 okanye mandithi imodeli elandelayo I-iPhone eza kuboniswa yiApple kulo nyaka ayizukuncipha.
Ukusuka kwesi sixhobo bavele babonisa eminye imifanekiso enokuba ingayintoni idummy okanye iprototype yemodeli elandelayo ye-iPhone apho inotshi incitshiswe ngokwenene xa kuthelekiswa nemodeli yangoku. Asikuthandabuzi ukunyaniseka kwesiqhelo saseJapan kwaye kukuba amarhe amva nje asungulwe kwinethiwekhi ngabahlalutyi abohlukeneyo kunye nabanye bathetha ngokuchanekileyo ngobungakanani obuncinci benotshi ukuze ekugqibeleni yenzeke.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba umhlalutyi we-KGI, uMing-Chi Kuo, uphawule into efanayo kwimidiya, ke oku kuncitshiswa kwenotshi kungagqibela ngokufika kwezi modeli zilandelayo ze-Apple. Inyani yile yokuba njengoko besiphawulile kumaxesha angaphambili inotshi iyimfuneko ukufihla izinto kwi-iPhone, kodwa kunokwenzeka ukuba iApple inezinye izisombululo ezilungiselelwe okanye ezibaluleke nangakumbi ngokubhekiselele kumacandelo kwaye ngale ndlela ukuncitshiswa kwale thebhu kufezekiswa phezulu kwesikrini.
Kuya kufuneka uqhubeke nokubona amarhe kunye neendaba ezivuzayo zoku ukuze uqinisekise kodwa kubonakala ngathi inxenye yeendaba zemodeli elandelayo ye-iPhone ihamba ngokuthe ngqo kunciphiso lwenotshi kwinxalenye yesikrini ukongeza uphuculo olukhulu kwiilensi zekhamera eyona nto iphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » IPrototype ye-13 ene-notch encinci ibonakala kwiMacotakara
Isilawuli sokunkcenkceshela i-Eve Aqua sihlaziywa ngenkxaso yenethiwekhi yeKhaya yeKit
Le inokuba yimibala emitsha yamatyala eMagSafe e-iPhone 12